प्रचण्डको ‘ओरिजिनल’ स्वीकारोक्ती - Vishwa News
१८ महिनाअघि भारतमा एकजना माओवादी नेताले प्रहरीसमक्ष आत्मसमर्पण गरे । प्रहरीको आँखामा तिनी टाउकाको मूल्य तोकिएका कुख्यात अपराधी थिए र विद्रोहीको आँखामा कमाण्डर । माओवाद र विद्रोहको नाममा भोगेका, देखेका र अनुभव गरेका दृष्य जब तिनले प्रहरीसमक्ष बयान गर्न थाले भारतीय माओवादीको असली अनुहार छताछुल्ल भयो । मुखुण्डो खुल्यो । पर्दा च्यातियो ।
उनले भने ‘लेबीको नाममा कार्यकर्ताबाट उठाइएको पैसा, न्याय र मुक्तिका नाममा सर्वसाधारणबाट लिइएको चन्दाको ठूलो हिस्सा विद्रोही नेताको मनोरञ्जनको नाममा दुोग भइरहेको छ । अधिकांश नेता भ्रष्ट र उनकै शब्दमा ‘औरतखोर’ भएका छन् । कतिपय नेता आफ्नै छापामारसँग सामूहिक यौन सम्बन्ध राख्नपर्ने लतमा छन् । नेता र तिनका परिवार रंगीन जिन्दगीमा अभ्यस्त हुँदै गइरहेका छन् । कतिसम्म भने महिलामाथिको यौन हिंसा पार्टीमै स्वभाविक बन्दै गएको छ र नेताहरु नारीमुक्तिको नारा लिएर निःसंकोच महिला छापामारहरुलाई बलत्कार गरिरहेका छन् ।’ यो कुन्दन पाहन नाम गरेका माओवादी नेताको साबिती बयान हो ।
त्यति नै बेला प्रहरीले पक्राऊ गरेका र प्रहरीसमक्ष आत्मसमर्पण गरेका दर्जनौं महिला छापामारसँग बयान लिएको थियो । बयानमा उनीहरुले एक स्वरमा ‘पुरुष कामरेडहरुले गरेका जबरजस्ती शारीरिक शोषण’का दर्जनौं उदाहरण दिइएको थियो । बयान दिनेमध्येकी एकजना किशोरीले भनिन्, नेताहरुले दार्जिलिङ, गोवालगायतका स्थानमा रहेका विलासी होटलहरुमा धरै रात बन्धक बनाएर बलत्कार गरेका छन् । उनीद्वारा आरोपित नेताको सूचीमा माथि उल्लेख गरिएको कुन्दन पाहनको नाम पनि उपल्लो सूचीमा थियो ।
भाग्य चम्काउन र रंगीन जीवनशैली बिताउन माओवादी भएका प्रमोद मिश्रा त्यसतै अर्का पात्र हुन् जसले माओवादीको आन्दोलनबाटै उठाएको द्रव्य लगानी गरेर आफूलाई नामूद रियलटर (घरजग्गा कारोबारी) बनाएका छन् । भारतमा ती नेताले बैंकपिच्छे नगद जम्मा र शहरपिच्छे गरेको लगानीको कन्दैया भलारीको खोजमूलक समाचार सार्वजनिक भएको एक वर्ष पनि पुगेको छैन ।
भारतीय माओवादीको यो पछिल्लो तस्वीरलाई नेपाली सन्दर्भमा तुलना गर्ने जिम्मा पाठकलाई छाडें । तर यो बीचमा मैले पनि नेपाली माओवादीका केही कुरुप अनुहार सम्झिएँ । सर्वहारा सत्ताको नाममा कुलीन, सभ्रान्त र नवपूँजीपति बनेका दर्जनौं नयाँ अनुहार सम्झिएँ । साँस्कृतिक क्रान्तिको खोलभित्र भएका उनीहरुकै भाषामा ‘साँस्कृतिक विचलन र पतन’का दृष्टान्त सम्झिएँ । गमेर ल्याउँदा ठहर गरें, मुहानले नै म नक्कली हूँ भनिसकेपछि बगेको पानी सङ्लो खोज्ने मै मुर्ख हूँ ।
भर्खरै तात्कालीन नेकपा माओवादीका प्रमुख, माओवादी विद्रोहका कमाण्डर पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एउटा आत्मस्वीकारोक्ती सार्वजनिक गरे । माओवादी विद्रोहको पतन भएको १४ वर्षपछि उनले भने, ‘म पनि ओरिजिनल (सक्कली) माओवादी होइन ।’ पूर्वमा आयोजित एउटा सभामा उपस्थित जनतर्फ फर्किएर उनले दोहार्याए –‘कमरेडहरु ! भ्रममा नपर्नुहोला म पनि सक्कली माओवादी होइन ।’ र, त्यसपछि उनी आफूलाई मदन भण्डारीसँग तुलना गर्नतिर लागे ।
सभामा उपस्थित धेरैले प्रचण्डको भनाईलाई हाँसेर टारे । हाँसोमै उडाए । तर प्रचण्डको आत्मस्वीकारोक्तिले तात्कालीन माओवादीको वैचारिक दिवालियापनलाई पनि प्रष्ट पार्दछ र राजनीतिक भ्रमहरुको पनि निवारण गर्दछ भनेर ठम्याउने कष्ट उठाएनन् । माओवादको आवरणले ढाकेर संसदीय जनवादको उत्कर्षमा पुग्ने बेलामा प्रचण्डले ‘म पनि माओवादी होइन र थिइन’ भन्नुको तात्पर्य र सँगै आफूलाई मदन भण्डारीसँग तुलना गर्नुको औचित्य भोलीको अभिष्टसँग जति जोडिएको छ त्यति नै जुन विरासतबाट प्रचण्ड उठेका थिए त्यसबाट अलगाव हुन सहज भएको छ ।
हिजो माओवादीइतरको सिंगो पंक्तिले शसस्त्र विद्रोहलाई लेनिनको शब्द सापटी लिएर ‘वामपन्थी भड्काव’ भनेकै हुन् । ऊ बेला प्रचण्डविरुद्ध लगाइएका आरोपहरुलाई उनी आफैं विस्तारै एकएक गर्दै स्वीकार गर्दै गइरहेको स्थिति छ । जनताका बीच क्रान्तिकारी मनोदशाको निर्माणविना एवम् उक्त मनोदशालाई सुविधाजनक बनाउने क्रान्तिकारी कार्यनीति कहिल्यै व्यवहारतः विकास हुनसक्दैन । खरिपाटीसम्म आइपुग्दा त्यो ठहर भएकै थियो । भलै संसद्मा सहभागिता अस्वीकार गर्न वा संसदीय अवसरवादलाई आलोचना गरेर क्रान्तिकारिता प्रदर्शन गर्न सजिलो छ तर संसदीय सरलतालाई क्रान्तिरुपमा बदल्न वा विद्यमान समस्याको समाधान खोज्न त्यत्ति नै कठीन छ । त्यो कठीन अवस्था चिर्न नसक्दा ‘म पनि नक्कली थिएँ’ भनेर उम्कन सबैभन्दा सजिलो हुन्छ ।
भएको त्यही नै हो । जहाँ छिन्नभिन्न मजदुर आन्दोलन एकीकृत हुने कुनै गुञ्जायस छैन, जहाँ भूमिहीन, विपन्न र किसानका दैनिक जीवनसँग सम्बन्धित कुनै कार्यक्रम र आन्दोलन छैन, जहाँ ग्रामीण क्षेत्रको बर्गीय सन्तुलन निम्न पुँजीवादी चिन्तनबाट उठाउन कुनै अगुवाई छैन, जहाँ बजार साम्राज्यवादको कठपुतली मात्र भएर राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय पूँजीपतिकै मात्र ताबेदारी र पक्षपोषण गर्न परिरहेको छ, जहाँ क्रान्तिको आवरणबाट उठेका नवसामन्त, नवसभ्रान्त, नवकूलीन बर्गकै मात्र संरक्षण र भरणपोषणमा आफूलार्य अभ्यस्त बनाउन परिरहेको छ त्यहाँ प्रचण्डले हिजो पनि आफू माओवादी थिइन र आज पनि होइन भन्नुमा कुनै आश्चर्य मान्नपर्दैन । यो अवस्थामा सांसारिक कर्म छाडेर हवनाज्ञादी, गोठपूजा, यज्ञ उद्घाटन र चरु होम गरेर बसिभूत र द्रविभूत हुनु कसरी आश्चर्य हुन्छ ?
प्रचण्ड झापा विद्रोहको जगमा उभिएको पार्टीको रखवाला गर्ने मुख्तियारी पाएकोमा दंग थिए र छन् पनि । चारु मजुमदारको नक्सली आन्दोलन र झापा विद्रोहको नियति लगभग उस्तै थियो । मजुमदारले गिरफ्तारीपूर्व नै लिखित दस्तावेजको रुप दिएको एउटा अंशमा ‘विनाशको सन्दर्भमा आवश्यकताभन्दा बढी काम भयो, हामीले गरेका गल्तीहरु सयौं छन्, त्यसलाई सँच्याएनौं भने हामी पतनको बाटो उन्मुख हुन्छौं’ उल्ल्ेख छ ।
एकदिन प्रचण्डले मजुमदारको यही शब्द सापटी लिएर ग्लानीपूर्ण भावमा अर्को स्वीकारोक्ती सार्वजनिक गर्लान् नै । किनकि, संकीर्णतावाद नेपाली माओवादी आन्दोलनले धेरै ठाउँमा स्वीकार गरिसकेको विषय हो (तर, सुधार गरेको होइन) । परिणामतः हिजोदेखि भन्दै आएको क्रान्तिकारी आन्दोलन फर्जी थियो किनकि हामी आफैं फर्जी विचारधाराबाट ‘गाइडेड’ थियौं भन्नपर्ने नियतिसँग प्रचण्ड ठोक्किएका छन् । म पनि सक्कली होइन, वा म पनि ‘ओरिजिनल’ होइन भन्नुको अर्थ अरु के हुन्छ ?